Igumbi le-204, i-Ocean View, apho abathandekayo kunye nezinja zingenza iinkumbulo ezimnandi kunye.
Dolsan-eup, Yeosu-si, South Jeolla Province, South Korea
UOnda unezimvo eziyi-383 zezinye iindawo.
***Kubandakanya ulwazi olongezelelweyo lwereyithi yomntu kunye nenani leentsana ezingena kwigumbi***
Yindlu yabahambi apho unokwenza iinkumbulo ezimnandi kunye nabantu obathandayo, usapho kunye nabahlobo.
I-Duplex (ibhedi ephindwe kabini) + 1 igumbi lokuhlambela + ikhitshi + igumbi lokuhlala
* Xa usongeza isilo-qabane, u-Airbnb akabeki ntlawulo eyongezelelekileyo, kodwa kufuneka uhlawule enye intlawulo kwindawo leyo.
* Ngeenkcukacha malunga nokongeza isilwanyana sasekhaya (iintlawulo ezongezelelweyo, izithintelo, njl.), nceda ujonge inkcazo yepropati.
I-BBQ yabucala kuwo onke amagumbi (I-Charcoal Grill / Zyggle)
・ Amalahle + isixa seGrili: 20,000 iphumelele iseti nganye
・ Isixa esongezelelweyo samalahle: 10,000 ewiniweyo ngeseshoni nganye
· Xa urenta i-ziggle, i-10,000 iphumelele iqhekeza ngalinye
Ixesha lokulungiselela: Emva kokungena kwigumbi ~ 9pm
Iiyure zokusetyenziswa: Emva kokungena ~ 11pm
※Umntu ongumntu akafumaneki
* Ukuze uyisebenzise ngokutyibilikayo, nceda wenze ugcino kwangaphambili ngokusebenzisa iinkcukacha zoqhagamshelwano zehotele ngosuku olu-1 phambi kokuba ungene.
• Iindleko ezongezelelweyo zebarbecue kufuneka zihlawulwe kwindawo.
[Iindleko ezongezelelweyo zenja]
Amagumbi alungele izinja: afumaneka kuphela kumagumbi 104, 203, 204, 301 no-302
Izinja ezincinci ezingaphantsi kwe-10kg ziyakwazi ukuhlalisa ukuya kutsho kwizinja ezi-2
Intlawulo eyongezelelweyo ye-15,000 iphumelele isilwanyana ngasinye (*Hlawula kwindawo)
Izixhobo zezinja ezifana nezindlu zangasese kunye neentambo kufuneka zilungiswe nguwe
Igumbi loku-1 lokuqubha langaphandle
Ixesha lokusebenza: De kube yi-21.09.08
Qinisekisa ukuyisebenzisa emva kokuhlamba.
I-sunscreen okanye ioli ayinakufumaneka ngelixa isetyenziswe emzimbeni.
Kufuneka uze nezakho iitawuli ezongezelelweyo.
Ukuntywila akuvumelekanga kwaphela.
Akuvumelekanga ukungena emva kokusela utywala, kwaye ukubaleka echibini okanye ukuya kwingxolo enkulu akuvumelekanga.
Ukudlala umculo usebenzisa izithethi akuvumelekanga.
Bazali abaneentsana, ncedani nilumke ngakumbi.
Asinaxanduva ngeengozi zokhuseleko ezenzeka ngenxa yokungakhathali komthengi kwindawo yokuqubha okanye yomhlalaphantsi.
* Ubukho kunye nomhla wokusebenza unokutshintsha ngokuxhomekeke kwimeko ye-site ngosuku, njengemozulu kunye nokuphazamiseka, ngoko ke nceda wenze ugcino emva kokuqinisekisa. Nceda uqaphele ukuba kunzima ukurhoxisa okanye ukubuyisela imali ngenxa yokungafumaneki kogcino olwenziwe emva kokubhukisha okungangqinwanga.